Izinsuku Zemvula Archives - IntoKildare
Imvamisa usuku olumanzi eholidini lisho ukukhosela ngaphakathi kungekho okuningi okufanele ukwenze. Ngenhlanhla sesijwayele ukuba nemvula noma izinsuku ezimbili e-Ireland futhi uzothola imisebenzi eminingi yasendlini nokuheha izingane kanye nabantu abadala ngokufanayo.
Akukho ndawo efana neKildare, lapho ilanga likhanya. Ukusuka emizileni yokuhamba izintaba emangalisayo, emiseleni emihle nasezinsaleleni zakudala zaseMpumalanga Yase-Ireland, iTroughbred County iyinhle ngempela! Kepha ake sibhekane nakho, sithola ingxenye yethu yezinsuku zemvula, futhi asihlali sikulungele ukunikela ngama-wellies ngosuku olumanzi. Esikhundleni sokuvumela isimo sezulu esibi sidikibalise imimoya yethu, namhlanje e-Kildare, siqoqe izinto ezinhle kakhulu okufanele sizenze eKildare lapho lina!
Iklabhu yokuphumula ethola imiklomelo eminingi enezindawo zokubhukuda ezingama-25m, i-spa, amakilasi okuzivocavoca kanye nezinkundla ze-astro ezitholakalayo kuwo wonke umuntu.
IKildare Town Heritage Centre ixoxa indaba yelinye lamadolobha amadala kakhulu e-Ireland ngombukiso othokozisayo wemultimedia.
Okuhlangenwe nakho kwe-Virtual Reality kukuhambisa emuva ngesikhathi ohambweni olungokomzwelo nolomlingo kwelinye lamadolobha amadala kakhulu e-Ireland.